Dawladaha Imaaraadka Iyo Qatar Oo siyaasad kala fog u wajahay Somaliland Iyo Soomaaliya | Salaan Media
Home Wararka Dawladaha Imaaraadka Iyo Qatar Oo siyaasad kala fog u wajahay Somaliland Iyo...
Hargeysa (SM)-Dawladaha Qadar iyo Imaraadka Carabta oo ka wada tirsan waddamada Khaliijka, ayaa siyaasad kala fog ku kala wajahay Somaliland iyo Soomaaliya, arrintan ayaa hadda uun u soo baxday dibada, iyadoo Dawladda Imaraadka Carabtu, ay diyaarad khaasa u soo dirtay Madaxweynaha Somaliland Axmed Silaanyo, oo la filaayo inuu maalinta Sabtida Ah ka dhoofi doono garoonka diyaaradaha ee Berbera una kicitimo Imaaraadka Cimraadka, siday warar xaqiiq ah ku heshay Shabakadda Caalamiga ah ee Somalilandtoday.com.
Dhinaca kale, Madaxweynaha dalka Soomaaliya, ayaa isna casuumad ka helay waddanka Qadar, isagoo maal maha soo socda si rasmiya uga degi doona dalkaas. Labadan Casuumadood ayaa u muuqda kuwo diirka ka qaadaya kala duwanaanshaha siyaasadda Somaliland iyo Soomaaliya. Dhinca kale Dawladda Qadar ayaa ilaa bilowgii ololihiisa ka hawlgashay Madaxweyne Xasan Shiikh, halka waddanka Imaraadka Carabtu wadatay Madaxweynihii hore ee Shiikh Shariif. Sidoo kale Dawladda Qadar waxay markasta tageero laxaad leh u fidisaa maamulka ay dhismihiisa wax ku lahayd ee Xasan Shiikh Maxamed, arrintan oo dadka la socday dhaq dhaqaaqa dawladda Qadar ee Soomaaliya ku tilmamaan, inay ka shaqeyeen wadaado u dhashay dalka Qadar oo xagga mabda’a diinta isku dhawayeen Xasan Shiikh.
Dhinca kale waddanka Imaraadka Carabta ayaa si weyn u badalay siyaasadiisi ku aadanayd Somaliland, iyadoo labadii sanno ee ugu danbeeyay, ay si weyn isugu soo dhawanayeen Xukuumadda Somaliland iyo Dawladda Imaraadku, Wasiirka Macdanta iyo Biyaha Somaliland ayaa hore shir caalamiya ugaga qayb galay dalkaas, iyadoo markale ay safar ku tageen Saddex Wasiir oo Xukuumadda Somaliland ka tirsani, bishii hore.
Sidoo kale waxay labadii sanno ee ugu danbeeyay Xukuumadda Imaraadka Carabtu mashariico waa weyn oo xagga biyaha u badan ka fulisay waddanka Somaliland. Si kastaba ha ahaate casuumadan Madaxweynaha Somaliland ay hadda u fidisay Dawladda Imaraadku, oo ka heer saraysa sidaanu wararka ku helayno boqashooyinkii uu hore ugu tagay dalkaas, waxay waji cusub u furaysaa xidhiidhka labada dal.
Geeska kale iyadoo saxaafadda qaar kood qoreen in Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamed tagi doono dalka Imaraadka, ayaanu warar rasmiya ku helnay in maal maha soo socda uu Madaxweyne Xasan Shiikh ka dagi doono dalka Qadar. Si kastaba ha ahaate, mawqifyada kala fog ee labadan dal kula kala macamileen Somaliland iyo Soomaaliya, ayaa u muuqda mid faa’iido weyn u leh dhinca Somaliland, maadaama oo waddamada Carabta badankoodu ku dhegenayeen qadiyadda midowga dalkii laysku odhan jiray Soomaaliya.